Itoobiya Oo Lagu Eedeeyay Inay Jirdil U Gaystaan Dadkii Lagu E... | Universal Somali TV
Itoobiya Oo Lagu Eedeeyay Inay Jirdil U Gaystaan Dadkii Lagu Eedeeyay Dhacdadii Dabka Ee Xabsiga Qiilinto.
Hay'adda xuquuqda aadanaha u qaabilsan ee Itoobiya ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mida 38 maxbuus oo lala xidhiidhinayo dhacdadii dabka 9-kii Sebteembar ee sannadka 2016 lagu jirdilo gudaha xabsiga .
Guddiga Xuquuqda Aadanaha ee Itoobiya (EHRC) sida ay wararku sheegayaan ayaa sheegaya in Maxaabiista lagu hayo xabsiyada Ziway iyo Showa Robit nooc ka mid ah jirdilka loo geysto ay ka mid tahay in laga saaro ciddiyaha taasoo ku reebta jirkooda jareexooyin badan.
Xukuumadda Itoobiya ayaa ka dib dhacdadii dabka ka kacay xabsiga Qiilinto xaqiijisay geerida 23 qof taasoo loo arkay inay tahay mid ka mid ah xarumaha xabsiyada ugu wayn ee dalkaas.
Warbaahinta dowladda FBC ayaa geesta kale sheegtay in 21 maxaabiis ah ay dhinteen kadib markii ay rabshad ka dhacday gudaha xabsiga halka laba ka mid ahna la dilay iyaga oo isku dayay in ay baxsadaan.
Laba dhismood ayaa dabka ku burburay iyada oo qalab ay ku jiraan joodariyeyaasha, bustayaal iyo sidoo kale meelaha lagu ciyaaro iyo meelaha kale ee ay isticmaalaan maxaabiista sidoo kale dabka baa’biiyay.
Dhowr maxaabiista iyo saraakiisha ayaa sidoo kale isbitaal la dhigay iyagoo uu soo gaaray heerar kala duwan oo dhaawacyo ah.
Bishii Nofeembar 2016, Maxkamadda Sare waxay si rasmi ah xukuntay 38 maxbuus oo lagu eedeyay dhacdada iyo dhimashada. Sida laga soo xigtay eedeymaha ay soo gudbiyeen xeer ilaalinta, dadka la soo ashkateeyey ayaa si ula kac ah u weeraray asxaabtooda ka hor intii aysan dabka gubin oo burburin hantida.
Kan-xigaErdogan Oo Ugu Baaqay Ruushka, Mareyk...
Kan-horeIsraa&#039;iil Oo Lagu Eedeeyay Inay ...
Israel oo iska diiday in ay ka danbeysay diyaaradii laga soo riday ruushka
38,735,305 unique visits